वेडिंग कार्डहरू स्क्रैपबुकिङ
विवाह प्रत्येक युगको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो, र यस दिन नवविद्रोह धेरै रिटेल र साथीहरूलाई बधाईमा छिटो छिटो छ, र सबैले उनीहरूलाई अविस्मरणीय बधाई दिन चाहन्छ। यस विविधतामा कसरी गुमाउनु हुँदैन?
अभिवादन असामान्य कार्ड बनाउन तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ। हो, हाँ, आश्चर्यचकित नगर्नुहोस्, यो पोष्टकार्ड हो। केवल यो कार्ड मात्र मौलिक, तर तपाईं धेरै बधाई छ जो जोडा को लागि धेरै व्यक्तिगत हुनु हुँदैन। र यस्तो पोस्टकार्ड सिर्जना गर्न तपाईंलाई उचित सरल सामग्री र निश्चित रूपले सिर्जना गर्ने इच्छा पर्दछ।
विवाहको लागि स्क्रैपबुकिङ कार्ड - मास्टर मास्टर
आवश्यक सामग्री र उपकरणहरू:
दुई प्रकार वा दुई-पक्षीय कागजको एक पानाको स्क्रैप पेपर (यो के यो काममा प्रयोग गरिन्छ);
पानीको रंग र एक ब्रश;
शासक, जादुई चाकू, एक सरल पेंसिल;
एक शिलालेख र एक स्वाद स्वाद (दुवै इन्टरनेट मा र मुद्रित गर्न सकिन्छ);
लटकुङमा मोतीहरू, मोतीहरू, स्फटिकहरू।
र यो जोडाको चाहनाको फोटो तपाईं बधाई चाहनुहुन्छ (हामी सबै एक विशेष पोस्टकार्ड पछि पछि) राम्रो हुनेछ।
त्यसैले, स्क्रैपबुकिंगको प्रविधिमा हामी विवाहको कार्ड सिर्जना गर्न मास्टर वर्गमा आवश्यक आवश्यक तयार पार्छौं:
सबै भन्दा पहिले, एक शासक र एक पुरानो चाकू को उपयोग गरेर, हामी स्क्रैप पेपर, watercolor कागज र गत्ता कटौती सही आकार को भाग मा कटौती गर्नेछ। साइजहरू तस्बिरमा हेर्छन्।
अर्को, हाम्रो पोष्टकार्डको आधार तयार गर्नुहोस् - सबैभन्दा ठूलो आयतमा हामीले सृजना गर्छौं (हामी तहको स्थान संकेत गर्छौं), मैले यस उद्देश्यको लागि एक शासक र साधारण चम्मच प्रयोग गरे।
त्यसपछि हाम्रो आधार र रिबन गीता जोड्नुहोस्, पूर्व-हल्का रूपमा टेपको किनारा छोडिदिन्छ ताकि यसले समयसँग भंग गर्दैन।
अर्को चरण एउटा शिलालेख र पानीको रंगको पेपर तयार गर्न हो। सेतो हो, निस्सन्देह, सुन्दर रङ, तर सबै पछि हामी असामान्य पोष्टकार्ड बनाउँदछौं, त्यसैले यो सानो रंग थप्न लायक छ। यो गर्न, हामी रंगको उपयुक्त पेंसिलसँग कागजको सतह छाड्छौं, र त्यसपछि हामीले कपडा वा कागजको टुक्रा छाड्यौं।
हाम्रो कामलाई स्पष्टता थप गर्नुहोस् - पेन्सिल, एक हेलियम पेन वा एक चित्रकलाको साथ पेपर किनारामा सिलाई लाइनको अनुकरण गर्नुहोस्।
अर्को, हामी सब्सट्रेटमा सजावटी तत्व पेस्ट गर्नेछौं र थप ट्रिम गर्नेछौं। किनारामा 2-3 मिमी को लागी हेर्न सकिन्छ।
गहना सिर्जना गर्न यो समय हो:
सजावटको रूपमा, मैले हृदयमा रोकाएँ, तर तपाईं कुनै पनि तत्व - फूल, सर्कल, बादल, आदि चयन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए, दिमागहरू: दायाँको मात्रामा पानीको कागजको गलत छेउमा तान्नुहोस्, र त्यसपछि यसलाई रङ्ग गर्नुहोस्। यो वांछनीय छ कि सजावट हाम्रो कागजमा टोनमा छ।
सुत्न पछि, तपाईंले हाम्रो हृदयलाई स्पष्टता थप्न आवश्यक छ-यसका लागि हामीले आवश्यक पेंसिल चयन गर्यौं, र त्यसपछि रूपरेखा तान्नुहोस् र रंगहरू थप्नुहोस्।
र अब यो पुरा समय मा सबै विवरणहरू इकट्ठा गर्ने समय हो:
हाम्रो पोष्टकार्डको "दिल" यसको "अगाडि" भाग भन्दा कम महत्त्वपूर्ण छैन, त्यसैले गरौं हामी कल्पनाको साथ डिजाइनमा जानुहोस्। शिलालेख र फोटो फ्रेमहरूको पक्षमा हामी एक क्लोरिकल चक्कु र शासकको सहयोगमा कटौती गर्दछौं, र त्यस पछि हामी रिबनहरूमा यी स्लटहरूमा सम्मिलित गर्दछौं।
यो महत्वपूर्ण छ !!! यदि तपाइँ तुरुन्तै नव-विवाहित जोडीको फोटो टाँस्नुहुन्छ भने, नबिर्सनुहोस् कि यो कागजको अघिल्लो तह 0.5 सेन्टिमिटर कम हुनुपर्छ र यो राम्रो हुनेछ यदि तपाईं एकै छविमा एक पटक रिबनमा फोटो खिच्नु हुन्छ भने।
चिपकने वाला टेप को मदद संग, हामी शिलालेख र फोटो फ्रेम, टक र टेप को किनाराहरु लाई गठित गर्छन, र तब समाप्त भागहरु सब्सट्रेट मा गोंद गर्छन। यो बीचमा हामी दयालु आनन्द हो।
यो अन्तिम भागमा जानको समय हो - अगाडिको पक्ष डिजाइन।
रचना बनाउन निश्चित हुनुहोस्, विकल्पहरू प्रयास गर्नुहोस्, किनकि यो ठीक गर्न गाह्रो हुनेछ।
तपाईले मनपराउने क्रममा विवरणहरू स्प्याक गर्नुहोस्, र ग्लुङको तस्बिर सुरू गर्नुहोस् र त्यसपछि हृदयहरू फिक्स गर्न सुरु गर्नुहोस् - यसका लागि हामीले बलियो ग्याट्कार्ड लिन्छौं (हामी बियर ग्याङ्गबोर्ड प्रयोग गर्दछौं, तर यो अवस्थामा बिरुवायुक्त गत्ताबोर्ड - एक बक्सको लागि प्रयोग गरिएको छ) उपयुक्त छ र हामी मनमा साना वर्गहरू जोड्छौं।
यस्तो प्रविधिले हाम्रो सजावट भोल्युम र वायुमण्डललाई धोका दिनेछ - अब हृदयहरू पोस्टकार्ड भन्दा माथि बढ्दो देखिन्छ।
खैर, अन्तिम चरण - हामी बेसमा सबै विवरणहरू ठीक गर्दछौं र यदि चाहियो भने स्फटिक वा मोतीहरू थप्नुहोस्। आफूलाई स्क्रैपबुकिङ शैलीमा त्यस्ता विवाह कार्डहरू अद्भुत वरदान हुनेछन् र उनीहरूले परिवारको अभिलेखमा सही रूपमा आफ्नो स्थान लिन सक्नेछन् - तिनीहरू केवल सुखद इच्छाहरू मात्र लिन्छन्, तर तिनीहरूका जीवनका क्षणहरू पनि फोटोमा समात्न सक्छन्।
कामको लेखक मारिना निकोषोवा हो।
क्रिसमसको रूख सिसल
मोती देखि विलो
एक कर्सेट कसरी टाई गर्ने?
तारको रिंग कसरी गर्ने?
फर्शमा कसरी स्कर्ट सिलाईयो?
उनीहरूको आफ्नै हातमा बिरालोको पोशाक
मास्टर वर्ग: ठमेल पोर्सेली
कसरी रूसी लोक पोशाक सिलाई गर्ने?
राम्रो किस्मत को लागि एक बनीर बनाउन कसरी?
बटनहरू आफ्नै हातले
ताजा प्याज कस्तो छ?
अमारनथ - रोपण र हेरविचार
पर्ड पनीर केक
यो रातमा किन खानेकुरा हानिकारक छ?
दाँतका सिस्ट - लक्षणहरू
खाडीका वयस्कहरूको लागी लोक उपचार
तपाईंको बालबालिकाको लागि शरद शिल्प
रीता ओरा एक गीशा को छवि मा एडिडास उत्पत्ति को लागि एक नया संग्रह शुरू गर्यो
स्टाइलिश बैग 2013
महिला चमडा जैकेट
चकलेटको गुलाब कसरी बनाउने?
बैठक कोठाको लागि Armchairs
डेनमार्क को बारे मा दिलचस्प तथ्यहरु
प्रारम्भिक गर्भावस्था दृढताको लोक प्रविधि
पहिलो महिनामा सुप्सको लागि नर्सिङ माईन
पिफ खमीर आटाबाट पिज्जा
बाथरूममा मोल्डबाट छुटकारा पाउन कसरी?
गर्भवती महिलाहरु को लागि शरद ऋतु